Okwukwe nke ịdị n'otu - WRSP
IKWUKWA NKE UNITY (FOU) TIMELINE
1930 (June 11): Dosteo Bisaka mụrụ na Kitoma Kibopizi, n'ime ụka Katọlik nke Bujuni, na ọdịda anyanwụ Uganda.
1944: Bisaka nwara ma o kweghị ka ọ banye na seminarị nke Katọlik. Anabatara ya na Nsamizi Teacher's College, Mityana.
1949: Bisaka nwetara ala na Muhorro, District Kagadi, ebe onye nkuzi ụlọ akwụkwọ praịmarị nọ ebe ahụ. Ọ tụrụ ihe dị ka acres iri asatọ na itoolu ma mesịa ghọọ isi ụlọ ọrụ FoU.
1966: Bisaka malitere ide ukwe abụ maka ụka Katọlik.
1975: Bisaka dere ukwe "Nkaikiriza Ruhanga Murungi" (Chineke m dị mma), onye kachasị ewu ewu na ihe niile o dere, bụ nke nwetara nnukwu mgbasa ozi na Katọlik na-aga n'ihu East Africa ruo Rwanda.
1975: Bisaka nwere ọhụụ ọhụụ na ahụmịhe omimi nke ịma jijiji n'aka ya mgbe ọ bụla a na-abụ abụ "Nkaikiriza" na ụka. Ọ nụkwara olu na-enye iwu ma na-enye ya ọrụ: "shall ga-agwọ ndị mmadụ site na mmetụ."
1980 (February 22): Bisaka metụrụ onye ọrịa aka, nwata nwanyị, a gwọkwara ya ozugbo.
1980: Itambiro ly'Omukama Ruhanga Owamahe Goona Ery'Obumu (Associationtù Na-ahụ Maka Ebe Ọgwụ nke Chineke nke All Army) guzobere. Ọ bụ aha mbụ na nke mbụ nke ihe ga-abụ "Okwukwe nke Unitydị n'Otu."
1983: Bisaka nwere ezigbo okpukpe ma ọ bụ ihe omimi dị omimi nke na-ewe ụbọchị atọ nke metụtara ọhụụ. A kọwara ya nanị ka ọ "gakwuuru Onye-nwe Chineke nke usuu nile nke ndị agha."
1985: Bisaka bipụtara Akwụkwọ nke Chineke na Bunyoro, asụsụ obodo na ememe nke FoU. Ọ bụ ederede dị nsọ ma ọ bụ akụkụ Akwụkwọ Nsọ nke FoU
1987: Nsụgharị Bekee nke Akwụkwọ nke Chineke e bipụtara.
1989: Gọọmentị Uganda machibidoro FoU iwu
1995: E buliri iwu nke FoU, ndị obodo Uganda nyere ndị otu ahụ ikike ịmara ha.
2005 (June 11): Onye nwe obodo, Yoweri Kaguta Museveni, Onye isi ala Uganda, guzobere Itambiro (Ebe ma ọ bụ Halllọ Nzukọ nke alinggwọ Ọrịa).
2014 (June 11): YK Museveni, Onye isi ala Uganda, mepere Obí, ebe obibi nke Bisaka.
Okwukwe nke otu n'otu bụ ihe ijuanya na òtù okpukpe na-arịwanye elu na Uganda na ihe karịrị ndị òtù 7,000,000 gbasaa n'ofe Osimiri Ukwu. Ihe omuma a di iche iche na ndi mmadu ndi nakpochapuru ihe, ndi ndi okachamara kwadoro na nkwenkwe Pentikostal na-ekpochapu Afrika dika oku. FoU malitere dị ka ihe na-agwọ ọrịa na akụkọ ihe mere eme ya, ememe ya, nkwupụta ọdịmma na nkwenkwe na Chọọchị Katọlik dị n'ebe ọdịda anyanwụ Uganda. Ọ bụ Dosteo Bisaka, onye bụbu onye Katọlik nke Katọlik na onye nkụzi ụlọ akwụkwọ praịmarị, malitere ntọala site na 1980 dị na Muhorro na mpaghara ebe dị na Kibale (ebe ọ bụ na ọ bụ ebe a na - agwọ ọrịa nke Chineke nke ndị agha) 2016 dị na mpaghara Kaigadi) na n'ebe ọdịda anyanwụ Uganda. A mụrụ Bisaka na June 11, 1930 na obodo Kitoma Kibozizi nke dị na chọọchị Bujuni nke ndị Katọlik, ebe nna ya, Peter Byombi, guzobere dịka onye Katọlik ụka. Dị ka onye isi Chọọchị Katọlik, Peter jere ozi dị ka onye Katọlik ruo afọ iri ise na asatọ, ọnọdụ nke nyere ohere ịmụta, ịghọta ma kụziere ozizi na ememe Katọlik. N'ebe a dị ka onye Katọlik, ọ chịkọtara isi obodo dị elu nke nyeere aka n'oge afọ nke afọ Bisatka. Nna nna ochie nke Bisaka, Peter Muhiigi, bụ Onye Kraịst nke mbụ. Obere ihe a maara banyere nne Bisaka, Agnes Kabayoora, n'ihi na ezitere Bisaka na-erubeghị afọ asatọ ka ya na nne na nna ya ochie, Alifonsio Wenkere na Martha Nyakake nọrọ. Dị ka akwụkwọ ndị Bisaka (1987: 7) nyere si jee ozi ụka Katọlik dị n'ógbè ruo afọ iri isii. Otu nne na nna ya, Martha, bụ onye na-ahụ anya na martyrdom nke Charles Lwanga na ndị enyi ya iri abụọ na otu (Ateenyi 2000: 67-68; Kassimir 1991) ka ọ bụ onye a gbaghaara ke ebe Mengo.
Martha eji na-akụzi [Bisaka] ọtụtụ ịdị mma nke Chineke. Okwu ndi Ozizi di ya n'obi ogologo oge. Ma nne na nna ochie nke Ya hụrụ Ya n'anya nke ukwuu, Ya bụ nwa na-erube isi, bụ onye na-elekọtakwa anụ ụlọ ha (Bisaka 1987: 7).
Bisaka ji obi ụtọ na-echeta mmetụta nke nne nne a na nhazi nke ọchịchọ na ọchịchọ nke [Bisaka]. Dịka ọmụmaatụ, mgbe ị debanyere aha na Mugalike School, "echiche nke ịghọ ụkọchukwu [Katọlik] nọgidere na Ya n'ihi nkuzi nke nne nne ya" (Bisaka 1987: 7). Okpukpe Bisaka na nnabata miri emi nke nne na nna ya na nne na nna ya mere ka o nwee mmasi nke ndi uka Katọlik. Na 1944, ọ chọrọ ịbanye na seminarị nke obere diocesan maka ọzụzụ nke ndị ụkọchukwu Katọlik. O kwenyeghi, ma o nweghi ihe doro anya mere o jiri ju ya. Mgbe Bisaka gụsịrị akwụkwọ na Mugalike School, ọ debanyere aha na Nsamizi Teacher's College, Mityana, site na ebe ọ gụsịrị akwụkwọ na asambodo ndị nkuzi nke Grade III, tozuru ya dị ka onye nkuzi ụlọ akwụkwọ. Site na ntozu ohuru ya, Bisaka kụziri ihe na Katọlik Primary School na Muhorro ruo afọ iri atọ na ise.
Ọ bụrụ na Bisaka adịghị azụ ọzụzụ maka ndị ụkọchukwu Katọlik, ọ kwụsịrị ịnụ ọkụ n'obi ime mmụọ na ọchịchọ ije ozi dịgasị iche iche n'ime ụka Katọlik. Dị ka onye na-agụ egwú mara mma, n'oge na-adịghị anya ọ ghọrọ choirmaster nke Muhorro Catholic Parish, agbata obi ebe ọ nọ n'ọrụ. Na mgbakwunye na ọrụ a, ọ ghọrọ odeakwụkwọ nke ụka Katọlik Muhorro na onye ndụmọdụ ime mmụọ na onye ndụmọdụ na Confraternity of the Legion of Mary Mary Mother of Grace. Ka oge na-aga, ọ hapụrụ ọkwa odeakwụkwọ wee ghọọ Onye isi oche nke Kọmitii Parish, ọrụ dị oke mkpa na ùgwù. Ihe ndekọ okpukpe ya mụbara mgbe onye isi diocesan, bụ Bishop Albert Edward Baharagate nke Diocese Katọlik nke Hoima (1969-1991) họpụtara ya n'ime Kọmitii Akwụkwọ Nsọ Diocesan. Nke a bụ nghota doro anya nke onyinye egwú ya na onyinye ya na ndụ na ememe nke obodo Katọlik obodo.
Igodo nke nkwalite mmụta ọsọsọ Nna-ukwu kacha elu Ching Hai 10 Isi ihe dị mkpa ma ọ bụ ịmara onwe onye nke Bisaka, yana ntọala nke FoU, bụ ihe mejupụtara abụ na egwu egwu, nke malitere na 1966. Ụfọdụ n'ime ihe egwu ya, dịka "Guba Mugisa Kuteranizibwa" gụnyere n'ime Rutooro Catholic Hynalnal (Runyoro Catholic Liturgical Hymnal). Ikekwe Bisaka na-etinye aka na okpukpe nke obodo ya mere ka ọ mara ọkwa ebe ọ natara ọtụtụ akwụkwọ ịkpọ òkù sitere na ndị ụkọchukwu nke parish gburugburu diocese ka ha na-enwe nzukọ ọmụmụ ihe maka ndị òtù ụka, gụnyere ụfọdụ ndị ụkọchukwu na ndị nọn. Onye nduzi nke ọmụmụ okpukpe na ụlọ akwụkwọ diocesan mgbe Bisaka na-eduzi seminarị ụbọchị ise na abụ ndị dị egwu na chọọchị Mugalike. Ná ngwụsị nke nzukọ ọmụmụ ihe ahụ, onye nọn ahụ na-elekọta ụlọ akwụkwọ ahụ kwuru okwu St. Augustine okwu na "Onye na-abụ abụ, na-ekpe ekpere ugboro abụọ" ná mgbalị ya iji mesie mkpa na onyinye dị egwu nke onyinye na egwu nke Bisaka. O nwetara agbamume dị iche iche, ekele na ego ego sitere n'aka ndị ụkọchukwu ekele, gụnyere Bishop Baharagate, maka ọrụ okpukpe ya na diocese. Nkwenye zuru oke maka onyinye ya mere ka ụfọdụ ndị ụkọchukwu kwupụta onyinye ya dị ka ọrụ pụrụ iche, nhọpụta nke Chineke, ma ọ bụ ọfịs dị nsọ: "Chineke họọrọ gị," onye ụkọchukwu gwara ya (Bisaka 1978: 9). Akwukwo nke akwukwo ya mere ka amara na Bishop nke Hoima kwadoro ya "iziga ya ka omuma omumu na egwu". na-agbaso ya na nke ọ na-enyeghị ihe kpatara ya (Bisaka 1987: 8).
N'ikwekọ na njirimara nke charisma, Bisaka [Image na nri] kwuru na ọ bụ "onyinye" nke ihe ọkpụkpọ egwu na ike karịrị ike mmụta ya ma ọ bụ ike ya. Ọ na-ekwu na abụ ya na ihe ndị na-egwu egwu bịakwutere ya n'egbughị oge n'enweghị "ịchọ ya" (Bisaka 1987: 9); ọ nabatara ha site na "nkuzi pụrụ iche." N'ikwu okwu dị otú a, Bisaka na-ele onwe ya anya dị ka ebe Chineke natara, otu arịa nke kwadebere ọtụtụ iri afọ nke nkuzi n'okpuru nne na nna nna ya ochie Katọlik na nna ndị Katọlik nakwa afọ nke ikere òkè na ịmepụta ihe dị egwu ndụ ndụ maka ndị Katọlik nke Hoima Diocese. Ọrụ ya dị ka onye na-agụ egwú egwú mere ka ọ bụrụ isi na 1975 na ngụkọta nke abụ nke gosipụtara mgbanwe na ndụ okpukpe ya na nghọta onwe ya dịka onye ndú okpukpe. N'afọ ahụ, o dere abụ ọ kpọrọ "Nkaikiriza Ruhanga Murungi," (Chineke m dị mma) [maka nsụgharị zuru ezu nke abụ a, lee Ukah 2018b]. N'ibu okwu amaokwu iri abụọ na anọ ma ọ bụ ahịrịokwu, Nkaikiriza, bụ abụ a na-adịghị ahụkebe nke ghọrọ ihe na-amasịkarị nke ọtụtụ ndị ụkọchukwu parish bụ ndị jiri ya na Katọlik Katọlik. Mgbe a na-eji abụ a eme ihe na chọọchị n'oge ememe Eucharistic, Bisaka kwuru na ụbụrụ anụ ahụ ga-amalite ime gburugburu ogwe aka na aka ya. Ka oge na-aga, ikpe ekpere "ekpere Onyenwe anyị" n'oge ndị na-agba akwụkwọ malitere ịmalite inwe mmetụta ahụ yiri Nkaikiriza. Dị ka onye nkịtị, ọ maghị otú ọ ga-esi kọwaa ihe omimi nke omimi nke "amalitere ịbịakwute ogwe aka ya ụdị ike pụrụ iche mgbe ọ bụla ọ ga-abụ abụ na chọọchị," ma ụfọdụ ndị isi chọọchị gwara ya na ọ bụ ihe si na ya pụta. ihe ndị o dere na Nkaikiriza.
Uche anụ ahụ n'oge ofufe na-aga n'ihu ruo afọ ise. Ná ngwụcha nke 1979, ọ sịrị na anụwo olu "na-enye Ya iwu,"Ị ga-agwọ ndị mmadụ site na imetụ ha aka '"(Bisaka 1987: 10, mesiri ike na mbụ). Mgbe olu ahụ nọgidere na-aga n'ihu ọtụtụ ugboro, ọ na-eleghara ya anya ruo ọnwa atọ n'ihi ụjọ ịghara ịma otu esi aga n'ihu, ya bụ, otu esi eji ma ọ bụ kwusi ntụziaka dị otú ahụ. Ọ maghi otú onye were ya n'ọrụ, ụka Katọlik, onye na-elekọta mmadụ na ndị dị ike na ọdịda anyanwụ Uganda n'oge ahụ, ga-emetụta ihe dị otú ahụ kwesịrị ime ka ọ bụrụ ọha na eze. Egwu niile na ejighị n'aka mebiri na February 22, 1980 mgbe ọ nwere obi ike ma 'nakwere ma metụ onye ahụ na-arịa ọrịa aka, ahụ wee gwọọ ya! Site n'ebe ahụ, ọ malitere ọrụ ịzọpụta ndị mmadụ site na ọrịa ndị dị iche iche "(Bisaka 1987: 10). Na bu-ndidi, onye mbụ Bisaka metụrụ ya aka ma mee ka ahụ dị ya ike (ihe omume ahụ nke mere ka ọ ghara ịgwọ ọrịa) bụ nwa agbọghọ nke na-arịa oké ahụ ọkụ nke a na-ekwu maka mwakpo ọjọọ, ọrịa na-egbu egbu n'akụkụ nke Uganda (Katuura et al. 2007: 48). Ụdị omume ahụ bụkwa otu epiphany nke atọ nke afọ nke mgbapụta mmadụ na Bisaka dịka onye isi ihe ngosi. N'ụzọ dị irè, ụbọchị a nke na-emetụ aka ma gwọọ onye ọrịa na-eme ememe na FoU dị ka ụbọchị e hiwere nzukọ ahụ, ọ bụ ezie na ọ bụghị aha "Association for God's Army Healing" ruo ọtụtụ mgbe.
Na mmalite na Akwụkwọ nke Chineke, Bisaka dere, sị:
Onyenwe anyị Chineke nke ụsụụ ndị agha mere ka edere Akwụkwọ a, na-ekwurịta okwu na Egobusobozi Bisaka, na-egosipụta ike ya na Itambiro ma na-agwọ ndị mmadụ n'ebe nile, na-ezube ime mmadụ otu, nke pụtara na njedebe agwụla (Bisaka 1987: 6, mesiri ike na mbu).
Okwu a dị mgbagwoju anya na-ekpuchi ozizi na nzube nke FoU. Bisaka bụ ihe nkwụnye na onye ogbugbo maka mkpughe ọhụrụ nke na-agwọ ọrịa dị ka ihe na-eweghasị akụkụ ndị gbawara agbawa, mmekọrịta na obodo, nke bụ ụdị ọrịa na ịdị n'otu na-eweta ha. Dị ka onye ogbugbo na agwọ ọrịa dị nsọ, Bisaka bụ Chineke. O sitere na ihe omimi omimi nke o nwere na Disemba 1983, nke ndi okenye nke ogbako puru igosi dika "o jekuru Jehova Chineke nke usu nile nke ndi agha" (§67), bu ihe omuma banyere chi na nmekorita ya chi nke bu isi ihe edere n'akwukwo nso, Akwụkwọ nke Chineke. Akwụkwọ a kpughere Akwụkwọ Nsọ bụ akụkụ nke onye ndú nke FoU, yana akụkụ akwụkwọ iwu na ozizi. O nwere ihe akaebe banyere ndị na-eso ụzọ mbụ na ndị kwere ekwe na Okwukwe. Ọ bụkwa akwụkwọ ekpere na ekpere. Edere ya na nke atọ na àgwà nke Catechism nke Chọọchị Katọlik, ma ọ bụ Akwụkwọ Nsọ, a gụpụtara ya n'amaokwu, ma ọ bụ ngalaba maọbụ paragraf maka ntụsara aka. N'adịghị ka Bible, Otú ọ dị, akụkụ ikpeazụ nke amaokwu Akwụkwọ Nsọ iri anọ na anọ nwere akụkụ "Ajụjụ na Azịza" nke gụnyere ajụjụ na azịza iri anọ na asaa, ụfọdụ n'ime ha ka a haziri n'usoro dị iche iche. Maka ndi otu FoU, Akwụkwọ nke Chineke is na mkpughe nke na - emeri ihe ọ bụla na nkpughe ọ bụla; ọ bụ banyere iwu dị nsọ na nke okike dị iche iche nke mmadụ na ụkpụrụ. A na-ewepụta ya site n'ọmụmụ ihe ọ bụla ma na-agụpụta ya site na onye ndú, dị ka mkpọsa. A na-agwa ha ọgbakọ dum, ha niile na-acha uwe ọcha dị ọcha, a na-akpọ kanzu, onye choro: "ego" (Runyoro for: amen). N'ụzọ dị oke egwu, a na-edepụta ọkọlọtọ na-ezo aka na Bisaka na isi obodo mbụ. Dị ka okwukwe nke okwukwe ma na-atụgharị uche na njedebe nke Akwụkwọ Nsọ nke Mkpughe (22: 18-19), Akwụkwọ nke Chineke ejiri enigmatic na chilling mechie ya, nkwuwa okwu-okwu ikpe: "Ọ dịghị onye ga-agbakwunye ma ọ bụ wepu okwu na ma ọ bụ site n'Akwụkwọ a ma e wezụga Onye edemede ya, Omukama Ruhanga Owobusobozi Bisaka"(Bisaka 1987: 84, mesiri ike na mbụ). Amaokwu a na-egbuke egbuke abụghị naanị ihe na-ede akwụkwọ ahụ na-abụghị ihe odide ndị ọzọ; a na-egosipụtakwa ma kaa ya ihe abụọ dị mkpa: Akwụkwọ mbinye aka Bisaka na logo nke FoU (1987: 6). Ihe atọ ndị a na-edepụta akwụkwọ ahụ site na isi mmalite nke mkpughe nke ndị mmadụ ma ọ bụ ndị na-eso ụzọ maara, dị ka Akwụkwọ Nsọ na Qu'ran. Na ajụjụ na azịza n'oge Orubungo, nleta ụka, nke Bisaka ka Munteme, obodo dị nso na Hoima (ihe dị ka kilomita iri isii na ise site na Kapymei), Bisaka gwara ọgbakọ ya na Bible bụ akwụkwọ na-adịghị adị ma gbaa akwụkwọ n'ihi na ọ bụ , n'adịghị ka nke ya Akwụkwọ nke Chineke, bụ onye dere akwụkwọ ahụ. Ịbanye akwụkwọ nke Chineke bụ ụzọ nke ịnweta ikike, mkpughe na onye edemede. Ntuzi dị otú ahụ na-ekpuchikwa ma na-eme ka nnyefe dị iche iche nata, ọbụlagodi maka ọdịmma.
Okwu ikpe a na ichi aka n'amaokwu a nwere ihe siri ike na nzukọ na nkuzi ozizi nke FoU. Ndi mmadu adighi egbochi ide ihe obula banyere ememe ma obu akuko nke ulo oru ahu, n'ihi na, dika ndi otu ndi otu si kwuo, ime nke a ga-adi "na-agbakwunye" na mkpughe nke di na Akwụkwọ nke Chineke. Ọbụna nsụgharị na nsụgharị nke akụkụ Akwụkwọ Nsọ na-ejigide ederede nke asụsụ Bekee (Lee, peeji nke 16, 21, 22, maka ihe atụ) n'ihi na ịzizi njehie na mmejọ dị otú ahụ nwere ike, ma ọ bụ ka a ga-akọwa ya site na nduzi nke otu dị ka ịgbakwunye na wepụ site na isi iyi, nke bụ Bisaka n'onwe ya. Ebe ọ bụ na ọbụna ndị gụrụ akwụkwọ na-achọghị ka a hụ na ha ga-agbakwụnye ma ọ bụ wepụga na mkpughe, enwereghị nkọwa ederede banyere ozizi, akụkọ ntolite, omume na ememe nke FoU. Ndị otu enweghị saịtị weebụ, ma ọ bụ magazin ụlọ ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ. Ike na mkpughe na-emechibido. Ọ bụ ọdịdị nke nchịkwa na nchịkwa nke ndị na-ede akwụkwọ, bụ nke na-adabere na echiche nke Gavin Flood (2011: 13) gbasara ọrụ dị mkpa nke ederede ederede n'ime okpukpe: "ihe ederede dị n'etiti ọgụgụ na ụwa, na ụwa na-etinye aka n'etiti okpukpe onwe onye na ọchịchị gọọmentị (Leekwa, Ukah 2018a: 361).
Nye ọtụtụ n'ime ndị na-eso ụzọ ya, nhụjuanya mgbochi (nke December 1983) bụ òkù nke "Ike n'ime Ike," nkwenye nke na-emesi ọtụtụ akaebe nke ọ bụghị nanị ike Bisaka n'ịgwọ ọrịa, kamakwa chi ya nke sitere na ya nweta ikike ya na charismata emanate. A kọwara ya dị ka "Egobusobozi," nke nwere ike. Akụkụ Akwụkwọ Nsọ nke FoU na-akọwa ọdịdị nke chi na ọrụ dịgasị iche (§176.1). Na Chineke, ọtụtụ mmụọ ndị mmụọ na ha, ha onwe ha, mara ụzọ ha si arụ ọrụ (§176.2):
Onye-nwe Chineke nke usu nile nke ndi-agha.
Onyenwe anyi Chineke nke idi nso nke Chineke.
Jehova Chineke nke ike nke Chineke; onye ga - eme mmadu, abiala ma na - aru ​​oru.
Ọ bụ onye a na-akpọ Akwụkwọ Ego Gbasara Akwụkwọ Ego"(Bisaka 1987: 54, mesiri ike na mbụ).
Owobusobozi bụ onye na-enye ikike, onye nwere ike nke sitere n'aka onye ahụ ma jiri ike na ikike ihe niile. [Foto dị n'aka nri] Ọ bụ ezie na Onyenwe anyị Chineke nke ụsụụ ndị agha bụ onye okike na Onyenwe anyị Chineke nke Nsọ nke Chineke bụ onye na-eme ka ọ dị ọcha ma ọ bụ dị ọcha nke mmadụ nile, Egobusobozi Bisaka, dị ka "Onyenwe anyị Chineke nke Ike nke Chineke bụ Onye Kasị Elu na ndị agha nke ndị mmụọ ozi nke Onyenwe anyị Chineke nke ụsụụ ndị agha, ndị a na-apụghị imeri emeri. Ọ bụ ya na-eme ka mmadụ dịrị n'otu. "(§176.3c; Bisaka 1987: 54). Dika ike nke Chineke, Egobusobozi na-agbaso ihe obula nke nkwekorita na oria nakwa n'ikpeazu, omwuhya, Onye ngbagbu ma obu Setan.
FoU na-agbasi mgba ike megide Iso Ụzọ Kraịst na Akwụkwọ Nsọ. E kweere na Bible bụ isi ihe kpatara ọdịiche na Bunyoro na ụwa: "[M] na-ekwu na ụfọdụ n'ime okwu ndị na-ekewa ndị mmadụ ka e dere" (§85; Bisaka 1987: 20). Ndị otu ahụ na-akpọ John 20: 23 ("ihe ọ bụla ị na-eke agbụ n'elu ụwa ga-agbụ n'eluigwe, ihe ọ bụla ị na-atọpụ n'ụwa ga-atọghekwa n'eluigwe") maka ịkatọ ntamu dịka isi iyi nke ndị ụkọchukwu mpako, mpako na mpako na nkewa , nkasi obi ma obu nkwekorita na "imebi ihe Chineke nyere n'iwu ka anyi huru ibe anyi n'anya." Ebubo kwa amaokwu a n'inye ndi isi okpukpe ohere itinye okwu nke onwe ha na ihe omuma ha n'ime akwukwo Nso di ka ndi sitere na Chineke, ihe omume nke na eme ka otutu ịkọwa Akwụkwọ Nsọ na ịmepụta plethora nke "òtù." Njikọ dị otú ahụ bụ maka ọkpụkpụ "òtù okpukpe [dabeere na] okwu ndị sitere na Bible" N'ịgbakwunye na inwe okwu ndị na-akpata ọgba aghara na ụba nke òtù, Bible, dị ka Bisaka si kwuo, bụ isi iyi ụgha. Ebe ọ bụ na Akwụkwọ Nsọ bụ isi iyi ụgha, ụgha na nkewa, ọ bụ isi iyi nke ịkpọasị na aghụghọ, n'ihi na ọ gbasara "imebi iwu nke Chineke nke ịhụrịta ibe ya n'anya" (Bisaka 1987: 21). Ikekwe, mkpebi siri ike na Bible bụ na "mmụọ ọjọọ ndị ahụ mekwara ka e dee okwu ha n'ime ya, okwu ndị mere ka akwụkwọ a weta esemokwu n'etiti ndị mmadụ" ya mere, ọ na-akụzi "ọgba aghara ... nke na-emegide otu ịhụnanya" ( XDNUMX-95; Bisaka 96: 1978).
Ọmụmụ Bisaka na 1930 bụ ntinye nke atọ nke atọ (nke mgbapụta), nke mbụ bụ afọ nke amaghị ihe mmadụ, njakịrị, na ọchịchị a na-akpọghị "ọchịchị nke Setan." Nke abụọ, oge Jizọs Kraịst na Iso Ụzọ Kraịst (§157-158), n'ụzọ nkà na-abịa na njedebe nke Afọ nke otu. Ọ bụ ezie na atọ nke atọ malitere na 1930, ozi kwesịrị ekwesị ma na-arụsi ọrụ ike malitere naanị na 1966 na ngwekọ nke abụ na mgbe e mesịrị na 1980 na nhazi nke FoU. Age nke atọ bụ afọ nke ịdị n'otu na ịdị n'otu: "Iji mee ka ndị mmadụ dịrị n'otu ìgwè atụrụ n'okpuru otu onye ọzụzụ atụrụ, Onyenwe anyị Chineke nke ụsụụ ndị agha ga-ebu ụzọ laa n'iyi Bible, ma nye ha okwu ọhụrụ ya nke ha ga-eji na afọ atọ "(§80, Bisaka 1987: 20, mesiri ike na mbụ). Afọ a bụ akara ozi nke Bisaka nke ịlụ ọgụ megide Setan, na-agwọ ọrịa ma na-eme ka ụmụ mmadụ dịrị n'otu site n'ibipụ ọgba aghara na ihe ọ bụla ọzọ na-egbochi mmadụ inwe ọganihu. Dika onye apocalyptic figure, akuko Bisaka bu ihe omuma nke uwa: agha Setan site n'ighachi nkwekorita, gwọta oria, si otú ahu me ka mmeputa na obi uto. Ya mere, ọ bụ Age Apocalyptic na-enwe usoro nhazi ọhụụ nke na-adabere n'anụ ahụ, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, okpukpe na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ịdị n'otu. Onye di omimi a n'egwuregwu a nke Bisma, nke nwere ikike n'elu ihe nile nke sitere n'aka onye okike. Ozi ọma ya, dị ka Otu Onye Okenye Okenye nke nzukọ si kwuo, bụ na "ọ wetara ihe ọmụma banyere Chineke nke meghere anya anyị ịhụ ihe dịka ha bụ n'ezie." N'ọgbọ a, "Chineke nọnyeere anyị, anyị na-eri nri na Ya, na ịṅụ ihe ọṅụṅụ Ya "(§100; Bisaka 1987: 22).
The FoU bụ nzukọ nke na-agbasa afọ nke atọ nke ịdị n'otu na ịdị n'otu, ọ na-enyekwa ụwa zuru ezu nke na-eme ka echiche ndị kwere ekwe dịrị ndụ, ụwa, mmekọrịta mmadụ na ibe ya na mmekọrịta ụmụ mmadụ na mpaghara ụwa. FoU na-amalite ọrụ kalenda ọhụrụ nke na-amalite site na ọmụmụ Bisaka na 1930 na ọkwa ọhụrụ nke aha maka ọnwa nke afọ na kalenda Gregorian: January: Kuhihire (Hope); February: Kusemererwa (Joy); March: Kuganyiru (mgbaghara); Eprel: Kwegarakamu (Nchegharị); Mee: Mugisu (Ngọzi); June: Tuhaise (Ka anyị bụrụ otuto); July: Twaikya (A nabatara anyi); August: Tugume (Be Stead); Septemba: Tutagwa (Ka anyị ghara ịda); October: Twekambe (Ka anyị rụọ ọrụ siri ike); November: Iri abụọ (Ka anyị kwere); December: Obumu (Unity).
Mkpụrụ okwu nke FoU bụ "Obumu nigo mani," "Ịdị n'Otu bụ Ike," okwu nkatọ nke na-ewepụta obi na nchegbu dị mkpa nke nzukọ ahụ. Bisaka bụ onye a ma ama ma ọ bụ ikike dị nsọ nke a na-enye iwu ka ọ jiri ikike ahụ weghachi ịdị n'otu na ụmụ mmadụ site na ọrịa na nkwarụ. Iji mezuo ozizi a ma ọ bụ ntụziaka ahụ, FoU nwere ụkpụrụ ọhụụ ọhụrụ nke nyere ya aka ịrụ ọrụ ya nke ịkụziri ụmụ mmadụ oge ọhụrụ nke mmepeanya nke Bisaka na-anọchi anya ya. Otu ihe di mkpa di iche iche di na ekele nke di n'ime otu: mgbe otu onye na-ezute onye ozo, otu na-eti mkpu, "Okwahukana" (Disunity), onye nke ozo na-aza, "Kuhoireho" (emechawo). Akụkụ nke abụọ nke ememe ekele bụ ikpere n'ala. Onye ọ bụla, n'agbanyeghị ya ma ọ bụ ọnọdụ ya, na-ehulata n'ihu Bisaka. Ọzọkwa, n'ime ụlọ nzukọ (Itambiro, n'ụzọ nkịtị: ebe ọgwụgwọ; pl. Amatambiro), onye ọ bụla na-eje ije n'ụkwụ efu; naanị Bisaka na-ebu akpụkpọ ụkwụ n'ime Itambiro ma ọ bụ na Kapyemi Camp. Iwepụ akpụkpọ ụkwụ na mkpuchi ma ọ bụ "akwa ákwà bụ ihe nrịta nke nkwanye ùgwù na nsọpụrụ nye Chineke dị ka onye okike" (§56-57). Site na ntụziaka a, ndị inyom anaghị ekpuchi isi ha ma anaghị eburu ogologo ntutu. N'ozuzu, ụmụ nwanyị na-ehulata n'ihu ụmụ mmadụ dị ka akụkụ nke ememe nkwanye ùgwù na ekele. Ndị nọ n'ọkwá dị elu, ma nwoke ma ọ bụ nwanyị, na-ehulata n'ihu ndị nọ n'ọkwá dị elu, ma nwoke ma nwanyị. Onye kachasị elu na-emetụ onye na-esote ya aka n'ubu ya ka ọ bụrụ akụrụngwa nke nkwenye. Akwụkwọ nke Chineke (§244-245) na-akọwa nzube ihe atụ nke ikpere n'ala dị ka ihe na-egosi nkwanye ùgwù na ntinye na ntinye elu:
Na omenala anyị na ụwa, ọ bụ Chineke anyị na-ehulata ala n'ihu, yana ndị nne na nna. Onye na-ehulata n'ala n'ihu Chineke pụtara na Ọ bụ Ya mere ya na onye na-ehulata n'ihu nne ma ọ bụ nna pụtakwara na ọ bụ ya mere ya. [...] Onyinye kachasịnụ onye na-ehulata ala nwere ike inweta, bụ onye ọ ga-ehulata n'ala. Ọ bụrụ na ọ gaghị emetụ ya aka, ọ na-eche na ọ bụghị nwa ya, onye ahụ emeghị ya (Bisaka 1987: 72).
Ikpere ụkwụ bụ ụzọ isi ejiji na ịhazi ihe gbasara mmadụ na ndụ, ọbụna mmekọrịta na nsonso. N'etiti ndị otu FoU (yana agbụrụ dị iche iche na Uganda, lee Dowden 2008: 14), [Foto dị n'aka nri] bụ ọrụ dị egwu nke ike, ogo mmadụ, mmekọrịta, iwu na udo.
Ụdị ụlọ ọrụ nke FoU dị ọcha na odo / edo. Ime obodo Itambiro dị n'isi ụlọ ọrụ ụwa nke nzukọ na Kapyemi ka eji acha ọcha. A na-ejikwa okooko osisi edo edo na uwe ọcha kpaa ebe ịchụàjà na ebe a na-anọ n'ụlọ nzukọ ahụ mma. Ndị na-eyi uwe na-eyi ọha egwu maka ihe omume dị egwu. A na-eji akwa ákwà na-acha ogologo oge, ọcha; a na-akpọ ya kanzu. A na-eji eriri ọcha, eriri, nke otu ihe ahụ, nke a na-akpọ abụara, na-ejide ya. A na-eji ákwà owu na-ete kanzus nke ndị òtù na-acha ọcha silk. Naanị akwa uwe onye uweojii nwere ike ime si silk, dị ka akara nke ọdịiche. Ya kitara dị iche; ọ sara mbara ma dị ogologo karịa ndị ọzọ ', dị ka ịkụziri bishọp Katọlik. Ákwà ọcha ahụ na-anọchite anya ịdị ọcha na ịdị nsọ; ihe na-anọchi anya ya bụ ihe e ji kee ihe na-eme ka mma agha nke onye kwere ekwe na-alụ ọgụ. Dị ka ụfọdụ ndị na-eme nnyocha si kwuo, whitezu na-eme ka ndị òtù ahụ "dị nnọọ mma dịka ndị ụkọchukwu na ndị ụkọchukwu Katọlik na-akpụzi" ọchịchọ na ịchọpụta ọdịmma nke nwere ike ịkọwa nhọrọ maka uwe akwa ahụ, na-atụle akụkọ nzuzo na ihe ọmụma gbasara Bisaka nke Katọlik eme ememe na omume. Otú ọ dị, akwụkwọ nke abụọ nke Akwụkwọ Chineke, Bunyoro mbụ na nsụgharị Bekee, bụ edo edo / ọla edo. Afọ ole na ole gara aga, ụfọdụ ndị òtù na-eji yellow kanzu, omume nke belata n'ịdị mma na ịchọrọ ọcha. Ụfọdụ ndị òtù ka na-ejigide ma jiri ụfọdụ n'ime edo edo ha, karịsịa nke kitara.
Ụbọchị nsọ nke ofufe dị na FoU bụ nke abụọ, nke iri na abụọ, na nke iri abụọ na abụọ n'ọnwa ọ bụla. A na-amata nhọrọ nke ụbọchị ndị a site na uche Chineke. Ọ bụ ezie na nzoputa na-agba mbọ kwa ụbọchị, ụbọchị atọ a bụ "ụbọchị nke Onyenwe anyị Chineke na-arụ ọrụ ebube nke ịzọpụta mmadụ niile n'aka Setan, onye iro, na ọrịa ha ..." (§142; Bisaka 1987: 26). N'ụbọchị ofufe, ndị kwere ekwe malitere ịbịa Itambiro dị ka oge asaa nke ụtụtụ wee chịkọta ọnụ na mpụga nke ụlọ ahụ na-akwado nkwadebe na atụmanya ọdịdị nke Bisaka. [Foto dị n'aka nri] Nkwadebe nke oge na-agụnye usoro usoro ma ọ bụ omume, nke mbụ bụ nyocha onwe onye mgbe onye kwere ekwe na-aza ajụjụ nke iri abụọ na atọ dị na Akwụkwọ nke Chineke (pp.55-56). Ajụjụ mbụ, dịka ọmụmaatụ, jụrụ, sị: "Enwere m ọgwụgwọ Setan n'ime ahụ m, na m kọọrọ ya?" Nke abụọ jụrụ, sị: "M na-agbaghara ndị na-emejọ m?" Ajụjụ ndị a na-agbaso site na mmekọrịta mmadụ na ibe ya ihe omimi na ihe omimi, dika "N'ihi na obu ndi nna ochie ka enyere m?" (Q.4); na "Ò nwetụla mgbe m na-amanye mmadụ iji ịhụnanya-òkè"? (Q5.). Ihe omimi ma obu ihe ndi ozo bu: "M na emeghari ndi mmadu ka ha buru ihe oriri?" (Q.14) na "Enwere m ike na ire m ma obu ihe di n'ime ahu m, nke mere na mgbe mu na mmadu kwurita uka ka onye ahu nwua?" ( Q12a) ma ọ bụ "Ọ dịwo mgbe m gburu mmadụ n'ihi enweghị ezi ihe mere (Q.13a). Ntinye na-adọrọ mmasị na ndepụta bụ Q.22: "Enweela m akwụkwọ ndị ọzọ, dịka Akwụkwọ Nsọ, na rosaries na ihe ndị ọzọ ..., nke ndị chi (satan) nyere m ka ha bụrụ ndị amụma, ma ha bụ Chwezi, na egobusobozi nke mere ka O kpoo chi ndị a n'ebe ha nọ? "(Chwezi bụ mmụọ nke echiche-ndị mmadụ kweere na ha nwere ikike ime mmụọ nke chịrị alaeze ndị dị n'akụkụ Osimiri Ukwu dị n'etiti narị afọ nke anọ na nke iri na isii nke Oge Akara.).
Ndị okenye okpukpe na-enyere ndị kwere ekwe aka n'ịchọpụta onwe ha ajụjụ nyocha nke iri abụọ na atọ. Ndị okenye a na-akpọkọta ndị kwere ekwe gburugburu ha ma kọwaa akụkụ Akwụkwọ Nsọ na ihe achọrọ n'aka ha. Ha na-enyere ndị kwere ekwe aka icheta mmejọ ha ma kwupụta ha n'ụzọ kwesịrị ekwesị iji kwadebe maka ịbanye na Itambiro. A gaghị ekwe ka otu onye (muhereza) ṅụọ mmanya na-egbu egbu, ma ọ bụ sịga sịga; ọtụtụ ndị na-eri nri ma ọ bụ na-edozi ihe ọṅụṅụ ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ frizzy na-atụle ụfọdụ ndị okenye dị ka ngwaahịa illuminati nke ike ọjọọ sitere n'aka ụwa dị n'ebe ọdịda anyanwụ na-eleba anya ma mebie ndị òtù. Mgbe njedebe nyocha onwe onye, ​​akụkụ nke ọzọ bụ nkwupụta mmehie na mmejọ. Ndị ọ bụla jiri nlezianya detuo mmehie ha na mmejọ ha na akwụkwọ ọcha, na-ede akwụkwọ a ma tụba ya na igbe a na-acha ọcha na-etinye n'usoro n'ihu ọnụ ụzọ nbata nke abụọ nke a na-eji nchịkọta osisi abụọ mee ihe. Ndị na-enweghị ike ide maka ihe ọ bụla kpatara ya dịka ọrịa ma ọ bụ agụghị akwụkwọ, na-agba ume ka ha rịọ enyemaka nke onye ọzọ nwere ike ịme mmega ahụ. Ikwuputa nmehie nke madu na "zoro ezo" bu ihe di mkpa nke ikwadebe maka nmekorita nke Chineke (§8). A na-ewere mmehie dịka ọrịa: ikwupụta na ọ na-achọ ahụ ike. "Mmehie n'ime mkpụrụ obi gị bụ ọrịa. Ọ bụrụ na ị gbochie ọrịa ịbanye n'ime gị, ị ga-anọgide na-enwe ahụ ike "(§139). Ná ngwụsị nke mmega ahụ, akwụkwọ ndị ahụ e dere ede na-adịkwaghị na incinerator na ọkụ. A na-etinye mkpochapụ nke akwụkwọ a mgbe ọrụ ogologo gasịrị.
Otu ihe dị mkpa maka ịbanye na Itambiro bụ nyocha ihe omimi nke Bisaka na-eme n'onwe ya. Ọ na-edugharị ya na ndị isi na ọnụ ụzọ akụkụ anọ na-acha ọcha na osisi na cross-mmanya. Ọ na-eguzo n'otu akụkụ nke post mgbe ndị òtù na-eje ije na ikpere ha agafe ya. Site n'oge ruo n'oge, ọ na-eme ka ụfọdụ ndị laghachikwuru ndị enyemaka n'ihi na ọ na-achọpụta na ndị a ekwupụtaghị mmehie niile ha zuru ezu. Usoro nke ndị na-enyocha ntụrụndụ n'ụzọ ime mmụọ n'ime Ụlọ Nzukọ Ọgwụ dị n'agbata awa abụọ na abụọ na ọkara, mgbe mgbe na ikuku ájá dị ka ndị mmadụ n'otu n'otu na-atụgharị iji gafee osisi n'enweghi ịlaghachi maka ịchọpụta ihe na nkwupụta. Na njedebe nke usoro a, ndị na-ekpuchi anya laghachiri na nnukwu ụlọ na-agbanwe, ebe ha na-agbanwe n'ime ritọkara ha ma wepụta bisaka abụọ na Bisaka, na-eji mkpara ya n'aka aka nri, na ndị enyemaka ya ozugbo (otu n'ime nke bụ onye isi agha nke Ugandan Defence Force (UDF) na azụ, n'ime Itambiro.
The Itambiro na Kapyemi, nke bu ihe nlereanya na nne maka ulo oru ofufe ndi ozo di iche n'ebe ozo, bu nnukwu ulo obula nke nwere ulo elu. Enweghị oche ọ bụla ma ọ bụ oche plastics na agba anọ. Ebe ịchụàjà bụ ebe dị elu na-acha ọcha ma na-acha odo odo na akwa okooko osisi, n'azụ nke bụ nnukwu ocheeze Bisaka nke nwere akara ngosi nke nzukọ ahụ nke a na-ahụ anya na-atụgharị na azụ azụ. The FoU bụ onye nlekọta na-elekọta mmadụ. Ọ bụ ezie na nzukọ ahụ kwusiri ike banyere ozizi nke ịdị n'otu na ịdị n'otu nke nzube na iwu, nhazi nke ịnọ n'ime Itambiro na-ekewapụ kpamkpam ma họpụta ya. Otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ohere nke Itambiro jupụtara oche oche plastik na agba anọ; nke abụọ n'ime ụzọ atọ nke ụlọ nzukọ ahụ enweghị oche ọ bụla. Ogwe oche plastik na-ejikarị agba akpụ:
Ụmụaka Bisaka, ụmụ ụmụ na-anọdụ n'oche oche edo edo;
Ndị ndú ọgbakọ ma ọ bụ ndị okenye, a kpọrọ Ọfọn (ha na-ahụ ha na kanzu nke nwere bọtịnụ abụọ n'ihu), na-anọdụ n'oche oche anụnụ anụnụ,
Ndị nkuzi na ndị isi nke ụlọ akwụkwọ FoU na-anọdụ n'oche oche
Ndị ọbịa si n'obodo na-anọdụ n'oche oche. Mgbe enwere ọtụtụ ndị ọbịa, dịka ọmụmaatụ, n'oge ihe dị mkpa dị ka ememe ncheta ụbọchị ọmụmụ onye ndú, ndị ọbịa nwere ike ịnọ n'oche oche.
Ndị ọzọ nọ n'ọgbakọ nọ na-ekesa otu ákwà ha na-esi na ụlọ ha na-ebutere ha ma nọrọ na ya n'oge ofufe. Ịnọ ọdụ n'oche dị na Itambiro, dị ka otu onye nọ, bụ ihe ùgwù dị ka akpụ akpụkpọ ụkwụ n'ime Itambiro ma ọ bụ n'ime akụkụ Kapyemi, nke jikọtara ya na onye guzobere òtù ahụ.
Ọrụ ọ bụla na-amalite site n'ịbụ abụ nke ụda atọ dị iche iche: nke mbụ bụ abụ nke ụlọ ọrụ ahụ, bụ nke ụda ukwe mba Uganda na-esote ma jiri abụ abụ East Africa soro. Ugbua ahu, ndi nwere keyboard, igwe okwu, na ihe egwu ndi mmadu na-abuputa egwu Akwụkwọ nke Chineke; otu, dịka ọmụmaatụ, bụ "Site na Ike ya." Egwú nke abụ ahụ nwere okwu bụ "Site n'ike ya / Chineke na-agwa anyị / Ịdị n'otu adịghị agwụ / ka ị zuru ike. (p.66). A na-esote ọhụụ dị mkpirikpi site na Akwụkwọ Nsọ na ndụmọdụ dị mkpirikpi ma ọ bụ ikwusa ozi ọma site na okenye. Onyinye ahụ bụ usoro mgbagwoju anya nke ndị na-ezukọta na-eweta onyinye ihe onwunwe, nke gụnyere ihe ubi, dịka pawpaw, cane sugar, millet, nsen ala na ihe oriri ndị ọzọ. A na-ere ihe ndị a ozugbo na usoro nzaba na onye bidder kachasị elu. Ọ bụ usoro iji belata ụda ihe dị iche iche n'ime ụdị ego.
Ngalaba kachasị njọ nke ofufe nke ihe omume, nke na-agwọ ọrịa, na-eme tupu njedebe nke ọrụ ahụ. N'okwu a, ndị ọgbakọ na-esi n'oche ma ọ bụ nọdụ ọdụ ma guzoro n'akụkụ akụkụ anọ nke oche / ocheeze. Bisaka na-aga site n'akụkụ aka nri ma na-agagharị na nhazi ahụ nke na-emetụ ihu n'egedege ihu nke onye ọ bụla nwere aka nri aka ya meghere na n'otu ekpere ahụ maka ha. A na-ejikọta Biski na-emetụ aka na ikpe ekpere nke ọ bụla nke na-emetụ aka ma na-ekpe ekpere, na-eburu ndị ọrụ ya, na-esetị aka aka nri ya na oghere aka ya na-eche ọgbakọ ahụ ihu; ọ na-ekpe ekpere n'olu dara ụda maka ha maka ọgwụgwọ na ọganihu. Ka ọ na-emechi ekpere a, ndị a metụrụ aka ma kpee ekpere ka ha laa n'ime ọgbakọ mgbe ha na-amalite isi ma na-eche ngwa ngwa na-ewere ọnọdụ nke ikpeazụ. Usoro ahụ na-aga n'ihu ruo n'onye ọ bụla nọ n'ọgbakọ ma ọ bụ n'èzí (ọ bụrụ na ụlọ nzukọ enweghị ike ịnabata onye ọ bụla) ahụmahụ nke ememe aka nke Bisaka na nkwụ n'egedege ihu ha ma kpee ekpere banyere ha. Ọ nwere ike iri n'etiti iri na abụọ na iri na ise ekpere maka Bisaka iji kwubie ihe omume a bụ isi nke gosipụtara ọrụ ngwọta ya na mweghachi nke nkwekọ na anụ ahụ. Ọrụ nke malitere na etiti ụtụtụ na-emechi n'ehihie. N'ịnọ n'ihu Bisaka, echetụghị banyere oge mmegharị oge. Onye ndu, ọbụna mgbe ọ dị afọ iri asatọ na itoolu, nọgidere na-abụrụ ndị ọrịa na ndị na-ahụ maka ahụ ike na-abanye na Kapalingi Na-agwọ Ọrịa na ịchọ "mmetụ nke Chineke." Njiri aka bụ akụkụ dị mkpa nke na-esite n'aka Umuau na-enweghi ohere inweta ụlọ ọrụ nlekọta ahụ ike na mpaghara a nke Uganda. Chineke kpasuru ya iwe bụ ihe na-eme ka mmadụ nweta amara (Chidester 2018: 179-94; Morgan 2018: 2).
Otu nzukọ nke nwere Chineke dịka onye guzobere ya na onye ndú enweghị isi mmadụ. A maara Bisaka ma kwenye na ya bụ Chineke n'ụzọ pụrụ iche na ụmụ mmadụ adịghị. N'ihi ya, ọbụlagodi dịka onye ndú na onye nchoputa FoU, nzukọ nwere ụdị pụrụ iche nke ikike nke siri ike ịghọta ma kọwaa. Dị ka ndị na-ahọrọ ndị mmadụ, usoro na ịdị n'usoro dị mkpa maka ịdị n'otu na ịgwọ ọrịa. Ọ bụ ezie na onye nchoputa bụ isi nke nzukọ ahụ ma na-echere ya mkpebi niile, a na-ahazi FoU dịka ịbanye n'òtù anọ dị mkpa.
Ihe ndị ọzọ (singl. Omukwenda): ndị a bụ ndị isi ndị okenye nyere n'aka ịgbasa ozi nke onye ndú, karịsịa banyere Afọ nke Atọ na ebe nke Owobusobozi n'oge ọhụụ maka ihe a kpọrọ mmadụ; ụfọdụ n'ime ha mgbe ụfọdụ na-elekọta otu ìgwè nke Abaikiriza, nke a na-akpọ Obukwenda. A na-amata usoro a nke ndị ọrụ site na bọtịnụ abụọ a na-ahụ anya nke na-ejikọta na mpaghara obi nke kanzu ha; dika onye otu ndi otu a, onye ndi ozo bu ndi ndu oge nile na ndi oru n'oru Bisaka na FoU, ya mere, "egbula" (abanyela n'ugbo ma obu oru ndi ozo;
Abahereza (singl. Omuhereza): nka bu otu ndi a bu "ndi oru Chineke"; ndị òtù bụ, Otú ọ dị, ndị sava na ndị ohu nke ọgbakọ; ha ka na-etolite na ozizi ma na-arịgo n'ogo nke ndu; ìgwè a na akara akara abụọ (na ebe bọtịnụ) n'ime mpaghara mpaghara nke hazuzu;
Abaikiriza (singl. Omwikiriza): usoro a bụ nke ndị mmadụ na-esonye na-esonye na nzukọ ahụ. N'akuku ya, ọ pụtara ndị kweere na ịdị n'otu n'ime Onyenwe anyị Chineke nke ụsụụ ndị agha ma ọ bụ "n'okwukwe ego nke Owobusobozi" (Bisaka 1987: 84).
Abenda na ndi ozo: ndi a bu umu nke egobusobozi ndi a ga-azoputa n'anu aru na n'ime mmuo dika nkwenkwe na omenala FoU.
Ozi: nke a bụ nraranye nke ọgbakọ ndị kwere ekwe (Abahereza) na ndị okenye (Abakwenda) n'isi. Iji kwuo okwu, ọ bụ ọgbakọ nke ndị kwere ekwe.
A maara onye otu FoU dị ka "Muhereza"; a na-akpọ onye na-abụghị onye a "Omutali."
Iji chọpụta na ọ bụ eziokwu, ọdịdị nke Africa na nchịkọta ụwa, Bisaka (1978: 83) na-eche na ndị ọhụrụ a ga-abụ echiche na-adịgide adịgide na nke a na-apụghị ịgbanwe agbanwe "na asụsụ niile." Echiche a, ma ọ bụ omume, kwekọrọ na mgbakọ nhazi nke FoU dịka otu mmegharị nke na-ezube igbanwe, dobe ma laghachi Afrika na ndi mmadu ka ha buru uzo ozo ma obu ihe omuma ha site n'ime ka ndi mmadu gbanwee dika otu ndu Afrika, omenala na mmekorita ya na uwa.
A na-ekewa FoU n'ime ọgbakọ nta (amatambiro: akin na "ndi ngwuro no n'agbata uka nke Katọlik") bu otu ndi oru anọ a na-akpọ abana: onyeisi oche (na-abụkarị nwoke ma ọ bụghị nwanyị!), Odeakwụkwọ, onye ndụmọdụ, na onye na-echekwa ego. Nchịkọta amatambiro bụ Obukwenda, ọzọ, dịka diocese na chọọchị Katọlik). E nwere ụlọ nnọkọ 1,340 na mba ahụ na njedebe nke 2016 gbakọtara n'ime iri atọ na abụọ ndị dị otú ahụ Obukwenda na Uganda naanị, bụ nke na-akọ na Bisaka, "onye guzobere Okwukwe nke Ịdị n'otu na Chineke, nke a ga-akpọ ego nke Faithbusobozi's Unity" (Bisaka 1987: 83). Bisaka nọ na ngwugwu nke nzukọ na ikike ike ma ọ bụ ikike dịka Chineke, onye ọhụụ, onye na-emepụta ihe, onye nhazi amara na ịdị n'otu nke ụmụ mmadụ. Kwa iri abụọ na asaa n'ọnwa ahụ, ndị isi niile ma ọ bụ isi nke Abana ga na Kapyemi ka ha na-elekọta ọrụ ha n'ihu Bisaka.
Otu ihe dị mkpa na ọdịbendị Africa nke FoU na-ahụ n'anya ma na-akpali ịnụ ọkụ n'obi bụ polygyny. Bisaka lụrụ nwanyị anọ (onye mbụ nwụrụ na December 22, 2003). Ọ lụrụ nwunye ikpeazụ ya na 2004. Na njedebe nke 2016, Bisaka nwere ụmụ iri na atọ (onye nwụrụ anwụ); ụmụ ụmụ iri asaa na anọ na umu ụmụ ụmụ 137. Nkọwa maka ọtụtụ alụmdi na nwunye Bisaka bụ na ya, dị ka Chineke, kwesịrị igosi ụmụ mmadụ ihe ọ pụtara iji nọgide na-enwe ezinụlọ mmadụ na ezigbo ezinụlọ ezinụlọ Africa. Ọzọkwa, ìgwè ahụ na-ekwusi ike na Chineke ekwughị na otu nwanyị; E boro Iso Ụzọ Kraịst ebubo dị ka isi iyi nke alụmdi na nwunye di na nwunye na Africa na n'ebe ndị ọzọ n'ụwa. Dika otu onye okenye si ele ihe anya, ndi agbomume nke FoU na agba ha ume ka ha lụọ di ka "i nwere ike idowe," dika otu okenye si kwuo, ma obu "dika o nwere ike idozi ya, dika ikike ya" ( §197). Ihe omuma di iche iche na ihe ndi ozo di n'akwukwo nso:
Iji belata ịgba akwụna na ụmụ nwanyị nọ n'ụwa, a ghaghị inye ndị inyom ohere iji lụọ di na nwunye ka ha wee nwee ike ịnọgide na-enwe ezi omume [...] Ịkwụsị nwoke ịlụ nanị otu nwanyị ka ọtụtụ ndị inyom na-aga n'èzí, bụ gbaa akwụna ume. Nke a bụ n'ihi na ndị na-anọ n'èzí aghaghị ịgagharị na-achọ nkwado. Dika ngbagwoju anya nke otutu ndi n'ime ha na ebute oria ndi di egwu nke ufodu ndi siri ike ngba. Ha nwedịrị ike ịnye ndị di na nwunye ụdị ọrịa ndị ahụ ma ọ bụrụ na onye ọ bụla n'ime ha na-akpọtụrụ ha (§197; 200; 201; Bisaka 1987: 60, mesiri ike na mbụ).
Nsogbu ndị a na ozizi a dị oke ma omume a bụ ihe na-adọrọ mmasị ọtụtụ ụmụ okorobịa na ime obodo Uganda. Ọ bụ ezie na e nwere ndị inyom nwere ike siri ike na ndị dị ike na nzukọ FoU (ọbụna ndị nkụzi nke Bisaka bụ ndị inyom niile) ndị inyom na-adabere n'ọnọdụ dị ala na ezinụlọ na ụlọ obibi. A na-eche ha dị ka isi iyi nke ọrịa ndị a na-ebute site ná mmekọahụ (dịka ma ọ bụrụ na ịgba akwụna na-eme nanị n'etiti ụmụ nwanyị), a gaghị ekwekwa ha ịjụ inwe mmekọahụ ma ọ bụ onyinye alụmdi na nwunye ụmụ nwoke. Dịka otu nwanyị si kwuo, a gbara ụmụ agbọghọ ume ka ha lụọ di na nwunye ngwa ngwa n'ime ụlọ ọrụ dị ka ụzọ isi gụnye ha na ụlọ na mmetụta nke njem ahụ dịka "ụmụ nwanyị na-eche na ha bụ ndị na-enweghị uche, ha bụ ndị mbụ ga-esi na ya pụọ okwukwe. "
Ụfọdụ n'ime ndị òtù na ndị ndú nke FoU yiri ndị nọ n'ụgbọelu nke na-aga ịkụda ma ndị na-aṅụrị ọṅụ ma na-atụgharị anya (Okenye okenye nke FoU, September 25, 2016, Kapyemi)
E nwere ọtụtụ ihe ịma aka nye FoU na ọdịnihu ya n'ọma ahịa nke okpukpe, ma ọ dịghị onye na-abịaru nso n'inweta charisma na onye ndú. Enweghi uzo ozo di n'ime nzuko. Dị ka ndị okenye ụfọdụ si kwuo, mgbe a jụrụ ha banyere onye ga-anọchi ya ma ọ bụ iwu nke nnọchiteanya, ha zara, sị: "Chineke apụghị inwe ihe ịga nke ọma." Ụdị charamma Bisaka bụ nke na-enye onyinye nke ịgwọ ndị ọrịa site n'ụzọ pụtara ìhè siri ike ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume ịkwaga ọzọ , onye na-anọchi ya. Dika ozo, Bisaka abughi ulo oru; ọ is ụlọ ọrụ ahụ.
Bisaka dị ka ozizi abụọ na ọfịs na-abụ ihe ịma aka ọzọ gbasara njikọta nke ndu na ikike. Ebe ọ bụ na ọ dịghị onye n'ime ìgwè ahụ nwere ike ịde banyere otu ma ọ bụ arụ ụka banyere akụkọ ihe mere eme na ozizi, enwere obere evolushọn na gbasawanye echiche na nhazigharị nke ozizi na omume nke otu. Ihe ịma aka a na-arịwanye elu site na ọnụ ọgụgụ na-eto eto nke ndị na-eto eto nọ na ụlọ akwụkwọ kachasị elu nke na-amụ gburugburu mba ahụ na-etinye aka na mgbasa ozi ọha na eze n'oge a na-ahazi ndụ ha na okpukpe ha ma tinye ọrụ ha n'ime FoU n'ime mpaghara mgbasa ozi. Ọchịchị onyeisi ndị dị n'etiti nzukọ ahụ ga-esiwanyewanye ike, ọbụna ọgba aghara, na ịbawanyewanye ókè nke mmekọrịta na mmekọrịta na mmekọrịta mmadụ na ibe ya site na nchịkọta nke ndị gụrụ akwụkwọ na ndị obodo.
Image #1: Omukama Ego nke Biski, onye nchoputa na onye ndu nke FoU, Kampyemi, 2016. Foto sitere na nchịkọta onwe onye nke onye edemede ma jiri ya mee ihe.
Foto # 2: Owobusobozi Bisaka na Mkparịta ụka ya na ndị na-eso ụzọ (Kapyemi Center, Septemba 2016. Foto sitere na ndekọ onwe onye nke onye edemede ma jiri ya mee ihe.
Foto #3: Okpukpe Ndị okenye na-enye ntụziaka maka ndị otu UMA tupu ememe ofufe. (Kapyemi September 2016. Foto sitere na nchịkọta onwe onye nke onye edemede ma jiri ya mee ihe.
Foto #4: Ndị na-enyocha ndị mmụọ na chọọchị tupu e tinye ha na Holy Itambiro (Kapyemi, September 2018. Foto sitere n'aka onye na-ede akwụkwọ ma jiri ya mee ihe.
Ateenyi, Musana Paddy. 2000. Ọganihu Okpukpe Ọhụrụ na Uganda na-anọghị na ya. PhD. Nkọwapụta, Ngalaba Nkà Mmụta Okpukpe, Mahadum Makerere, Kampala, Uganda.
Bisaka, Owobusobozi. 1987. Akwụkwọ nke Chineke nke ịdị n'otu: Anyị bụ otu n'ime Onyenwe anyị Chineke nke ụsụụ ndị agha - Njikọta ejedebe. Kapyemi: Okwukwe nke Unity Press.
Chidester, David. 2018. Okpukpe: Ihe di omimi. Oakland, California: Mahadum California Press.
Dowden, Richard. 2008. Afrịka: Mba ndi gbanwere agbanwe, Ajuju ndi ozo. London: Portobello Books Ltd.
Iju mmiri, Gavin. 2011. "Ibi n'Ọdịda: Onwe, Ederede na Ụwa." Temenos 44: 13-34.
Kassimir, Ronald. 1991. "Ndị Nkụgharị Na-ahụ Maka Ụgha: Ihe Atụ nke Nzukọ Katọlik Katọlik na Ọdịiche Nchịkwa Ọchịchị na Uganda." Ihe Afrika 90: 357-82.
Katuura, E, P. Waako, J. Ogwal-Okeng, na Bukenya-Ziraba. 2007. "Ọgwụgwọ Ọgwụgwọ nke Ọrịa
na Mbarara District, Western Uganda. " Akwụkwọ African Ecology 45: 48-51.
Morgan, David. 2018. Foto ndị dị na Ọrụ: Agụmakwụkwọ Ihe Egwu nke Enchantment. Oxford: Oxford University Press.
Ukah, Asonzeh. 2018a. "Na-agbakwasi Chineke ike: Mba Ndị Dị n'Otu nke Obodo Ebube - Echiche site na Nigeria na Uganda." Akwụkwọ nke Contemporary African Studies 36: 351-368.
Ukah, Asonzeh. 2018b. "'Ihe niile bụ plastic': Okwukwe nke Ịdị n'Otu Otu na Ịmepụta Okpukpe Katọlik Katọlik." Akwụkwọ maka Ọmụmụ Ihe gbasara Okpukpe 31: 138-60.